Bariga Dhexe - BBC News Somali
Posted at 3:32 16 Nofembar 20213:32 16 Nofembar 2021
Muxuu ahaa dhoolatuska ay wadajirka u sameeyeen Israa;iil iyo dalalka Khaliijka?
Tallaabadan oo aan cidna aysan maskaxdeeda ku soo dhacdeen saddex sano ka hor, ayaa ciidammada badda ee dalalka Khaliijka waxay bilaabeen dhoolatus milateri oo wadajir ah, taasoo ah tii ugu horreysay ee ay abid la sameeyaan dhiggooda Israa'iil, iyagoo kaashanaya ciidammada badda ee Mareykanka.
Posted at 4:34 11 Nofembar 20214:34 11 Nofembar 2021
Israa'iil ma waxay doonaysaa in ay weerarto xarumaha Nukliyerka Iran?
Taliyaha Ciidamada Israa'iil oo sheegay iney iisu diyaarinayaan sidi ay u weerari lahaayeen xaruumaha Nukliyerka Iran.
Posted at 18:09 9 Nofembar 202118:09 9 Nofembar 2021
4 meelood oo khatar ku haya nabadda caalamka oo muran xadka ah uu ka taagan yahay
Dagaallo ku saabsan afar meelood ayaa muddo dheer socday waxayna halis ku yihiin nabadgalyada guud ee adduunka.
Posted at 14:11 16 Oktoobar 202114:11 16 Oktoobar 2021
Israa'iil waxay ka mid tahay dalalka ku jira halista amni, si lama filaan ahna dhibaatooyin usoo wajihi karaan, sababtoo ah kuma aysan guuleysanin in ay nabad la gasho dariskeeda.
Posted at 6:37 15 Oktoobar 20216:37 15 Oktoobar 2021
Waa kuma ninka ay dartiis isu dagaaleen muslimiinta iyo masiixiyiinta Lubnaan?
In muddo ahba xiisad weyn ayaa ka taagneyd sida loo baarayo qarixii musiibada ahaa ee khaasara badan sababay.
Posted at 10:46 11 Oktoobar 202110:46 11 Oktoobar 2021
Dal aan hadda ka mid ahayn dunida balse dadkiisa ay weli jiraan
Deegaankan wuxuu caan ku yahay dhul bacrin ah oo wax soo saar leh. Sawaxanka, iyo dhawaaqyada xanuunka ee la maqlayay ayaa ahaa kuwo ka guuxayay waddooyinka dhulkaas.
Posted at 3:33 7 Oktoobar 20213:33 7 Oktoobar 2021
Xeeladihii ay Carabta u adeegsadeen dagaalkii ay la galeen Israa'iil oo la shaaciyay
Dukumiintiyada Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in midowgii Soofiyeeti "ay kula taliyeen madaxweynihii geeriyooday ee Masar Anwar Sadat inuu doorto oo uu duullaanka qaado 6Oktoobar 1973" si uu uga gudbo Kanaalka Suweys una bilaabo weerarka ciidanka Israa'iil ee qabsaday Sinai.
Posted at 12:36 6 Oktoobar 202112:36 6 Oktoobar 2021
Sirdoonka Israa’iil oo lagu wareejiyay howlgal aan guul laga gaarin tan iyo 1986
Howlgal "weyn" ayaa la billaabay si la isugu dayo in xal loo helo mid ka mid ah kiisaska ugu jah wareerka badan ee Israa'iil, sida uu sheegay Ra'iisul Wasaaraha.
Bog 1 of 13